MRB musoro kuverenga kamera HPC010
Vazhinji vedu musoro kuverenga kamerazviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedumusoro kuverenga makamera.
Iyo HPC010 musoro kuverenga kamera inoshandisa inozvigadzira-mbiri-kamera kudzika algorithm modhi kuti igoona zvine simba muchinjikwa-chikamu, kukwirira uye kufamba kwekufamba kwechinangwa, nekudaro kuwana yakakwira-chaiyo chaiyo-nguva-yenguva yekufamba kwe data, uye yakavakirwa-muHuawei yakatsaurirwa vhidhiyo Hardware yekumhanyisa injini yakakwira-yekuita yekutaurirana midhiya processor, Kuziva kwakaringana kwezvakawanda zvinangwa, otomatiki kusefa kwekukanganisa chero nguva.
MRB's musoro kuverenga kamerainogona kukwidziridzwa kune yepamhepo vhezheni, iyo inonyanya kukodzera kune cheni chitoro fomati. Mushure mekusimudzira, mamaneja anogona kuona chaiyo-nguva mutyairi kuyerera kwezvitoro zvakasiyana siyana kutenderera nyika pamuzinda wekambani. Kumba, zvinokodzera kwazvo maneja kuita data data. Iyomusoro kuverenga kameraine chitarisiko chidiki uye iri nyore kwazvo kuisa. Zvinoenderana nemirayiridzo yekumisikidza, vakajairika vatengesi vezvitoro vanogona kuiisa isina kuisirwa nyanzvi, vachichengetedza mari yekuisa. Uye zvakare, software ine simba ye musoro kuverenga kamera Basa, zvine hungwaru kusiyanisa nzira yekupinda nekubuda kwevanhu, kupatsanura kuverenga uye huwandu hwekupinda nekubuda, huwandu hwevanhu mukati nekunze hwakajeka nekungotarisa, uye iyo data inotumirwa kune anogashira anogamuchira kuburikidza neasina waya kufambisa kuti aumbe data yenguva yekufambisa. Iyomusoro kuverenga kamera inodzivirira tambo dzese dzinosanganisira tambo dzemagetsi uye mitsara yechiratidzo Yakareba-yakavharidzirwa yakavharidzirwa isina waya kutapurirana, yakasarudzika-yakagadzikana, inoratidzika-yakapfuma mutakurwi kuyerera kuverenga software, iyo inogona kupa graphical kuratidza kune akasiyana mabasa senge data query, ongororo, kuverenga, kuenzanisa uye kutumira kunze.
MRB's musoro kuverenga kamerayakaiswa kumakumi ezviuru ezvitoro muzvitoro zvakasiyana siyana zveindasitiri kutenderera nyika, kutengesa kuri kumberi, uye kugadzikana kwechigadzirwa kwakasimbiswa zvizere. Maawa makumi maviri neshanu asina kukanganiswa mapasipoti ekufambisa kwevatakurwi uye kuongororwa kwedhata kwakaringana zvinobvumidza zvitoro zvakasiyana kuti zvinyatso kudzora kuburikidza neapassenger kuyerera manhamba Shopping mall marongero, zvirinani kuona rendi uye kudzora mafambiro evafambi kuyerera pane yega yega gorosi.
Tsanangudzo yeMusoro kuverenga kamera
Chirongwa Equipment Paramende Zviratidzo Zvekuita
Magetsi DC12～36V Kuchinja kwemagetsi kwe15% kwakabvumidzwa
Simba rekushandisa 3.6W Avhareji yesimba rekushandisa
System Mutauro Unoshanda Chinese / Chirungu / Spanish
Kushanda interface C / S mashandiro ekugadzirisa mamiriro
Akarurama zvazvingava 95%
External inowanikwa RS485 interface Tsika baud chiyero uye ID, yakawanda muchina network yakatsigirwa
RS232 interface Tsika baud mwero
RJ45 Kugadziriswa kwemidziyo, http protocol kufambisa
Vhidhiyo kuburitsa PAL, NTSC system
Inoshanda tembiricha -35 ℃ ～70℃ Munzvimbo yakanaka ine mweya
Kuchengetedza tembiricha -40 ~ 85 ℃ Munzvimbo yakanaka ine mweya
Avhareji yekundikana-yemahara nguva MTBF Anopfuura maawa zviuru zvishanu
Kuisa kukwirira 1.9 ~ 2.2m
0,001 lux (yakasviba nharaunda) ~ 100klux (kunze kwezuva chaiko), hapana zadza-mune mwenje unodiwa, chiyero chakaringana chisina kukanganiswa nekuvhenekerwa kwenzvimbo.
Earthquake kuramba pamwero
Inosangana nenyika yeQC / T 413 "Basic technical mamiriro emagetsi emagetsi zvigadzirwa"
Inosangana EN 62471: 2008 "Photo-biological kuchengetedzwa kwemarambi uye marambi masisitimu"
Dhigirii redziviriro Inosangana IP43 (yakazara guruva-chiratidzo, anti-mvurajet kupindira)
Kupisa kupisa Passive chimiro chekupisa kupisa
Saizi 178mm * 65mm * 58mm
Tine mhando dzakawanda dze IR, 2D, 3D, AI musoro kuverenga kamera, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo musoro kuverenga kamera zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
HPC199 AI mota counter vhidhiyo yekuverenga mota
Pashure: MRB AI Motokari kuverenga system HPC199
Zvadaro: MRB vanhu vanoverenga kamera HPC008
3d Kuverenga Kamera
3d Vanhu Kupikisa
3d Vanhu Kuverenga Sisitimu
MRB 3D Vanhu kuverenga system HPC009
MRB AI boka revanhu rinopikisa HPC198